အရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ Lamborghini ကို ခုန်ကျော်ပြီး စတန့်ပြရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ။ – SoShwe
Home/Other/အရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ Lamborghini ကို ခုန်ကျော်ပြီး စတန့်ပြရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ။
admin May 13, 2022	Other Leaveacomment
အခုနောက်ပိုင်း လူတော်တော်များများဟာ Social Media စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပြီိး လူတွေရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စရပ်တွေကို ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာလည်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ အရှိန်ဖြင့်မောင်းနှင်လာတဲ့ Lamborghini ကို ခုန်ကျော်ပြီးစတန့်ပြရန် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့မှ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် Armand လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူထံမှ Lamborghini တစ်စီးကို လက်ဆောင်အဖြစ် ရက်အချို့မောင်းနှင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး Lamborghini တစ်စီးကို ရက်အချို့ စီးနင်းခွင့်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားမိသလဲ ? ? ? ကျွန်တော်သာဆိုရင် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး ပြိုင်ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့ Lamborghini ကြီးကို မောင်းနှင်ပြီး ခရီးတိုလေးတစ်ခု သွားဖို့ စိတ်ကူးမိမှာပါ။ သို့ပေမယ့် Armand ကတော့ အခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲ အခုလိုမျိုး အန္တရာယ်များတဲ့ စတန့်ပြဖို့ စိတ်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Armand တစ်ယောက် သူ့သူငယ်ချင်းတွေအကူအညီနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေ အရှိန်ဖြင့်မောင်းနှင်လာတဲ့ Lamborghini ပေါ်ကို ခုန်ကျော်ပြီး စတန့်ပြဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း Armand ရဲ့ စတန့်ပြကွက်ဟာ ကောင်းမွန်စွာ အဆုံးသတ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ သူ့အနေနဲ့ တော်တော်လေးအထိနာခဲ့ရပါတယ်။
Armand တစ်ယောက် ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် အခုလိုမျိုး ရူးမိုက်တဲ့ စတန့်ပြကွက်မျိုးကို ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတာလဲဆိုပြီး လူတွေရဲ့ ဝေဖန် အပြစ်တင်တဲ့ ပို့စ်တွေဟာ Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေပါတယ်။ Armand အနေနဲ့လည်း အခုလိုမျိုး ရူးကြောင်ကြောင်စတန့်ပြကွက်မျိုး ပြသခဲ့တဲ့အတွက် နောင်တရနေမှာ ကျိန်းသေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ နောက်ပိုင်းရရှိတဲ့သတင်းတွေအရ Armand တစ်ယောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီး သိရှိရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ဒီလို ရူးကြောင်ကြောင် စတန့်ပြကွက်မျိုးကို ပြသဖို့ မကြိုးစားကြပါနဲ့နော် . . .
အရွိန္နဲ႕ေမာင္းလာတ့ဲ Lamborghini ကို ခုန္ေက်ာ္ၿပီး စတန္႕ျပရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲသူ။
အခုေနာက္ပိုင္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Social Media စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားၿပီိး လူေတြရဲ႕ အာရုံစူးစိုက္မႈကို ရရွိခ်င္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ထူးထူးဆန္းဆန္းကိစၥရပ္ေတြကို ျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။ အခုတစ္ခါမွာလည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွ အရွိန္ျဖင့္ေမာင္းႏွင္လာတ့ဲ Lamborghini ကို ခုန္ေက်ာ္ၿပီးစတန္႕ျပရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲတ့ဲကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခ့ဲပါတယ္။
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ Armand လို႕ေခၚတ့ဲ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူထံမွ Lamborghini တစ္စီးကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရက္အခ်ိဳ႕ေမာင္းႏွင္ခြင့္ ရရွိခ့ဲပါတယ္။ တကယ္လို႕ သင့္အေနနဲ႕ အခုလိုမ်ိဳး Lamborghini တစ္စီးကို ရက္အခ်ိဳ႕ စီးနင္းခြင့္ရရွိခ့ဲမယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္မယ္လို႕ စဥ္းစားမိသလဲ ? ? ? ကၽြန္ေတာ္သာဆိုရင္ ကမာၻ႕အျမန္ဆုံး ၿပိဳင္ကားတစ္စီးျဖစ္တ့ဲ Lamborghini ႀကီးကို ေမာင္းႏွင္ၿပီး ခရီးတိုေလးတစ္ခု သြားဖို႕ စိတ္ကူးမိမွာပါ။ သို႕ေပမယ့္ Armand ကေတာ့ အျခားသူေတြနဲ႕မတူဘဲ အခုလိုမ်ိဳး အႏၱရာယ္မ်ားတ့ဲ စတန္႕ျပဖို႕ စိတ္ကူးခ့ဲတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Armand တစ္ေယာက္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြအကူအညီနဲ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ကေန အရွိန္ျဖင့္ေမာင္းႏွင္လာတ့ဲ Lamborghini ေပၚကို ခုန္ေက်ာ္ၿပီး စတန္႕ျပဖို႕ ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္။ သို႕ေပမယ့္လည္း Armand ရဲ႕ စတန္႕ျပကြက္ဟာ ေကာင္းမြန္စြာ အဆုံးသတ္ခ့ဲျခင္းမရွိဘဲ သူ႔အေနနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ေလး အထိနာခ့ဲရပါတယ္။
Armand တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ အခုလိုမ်ိဳး ရူးမိုက္တ့ဲ စတန္႕ျပကြက္မ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ဖို႕ႀကိဳးစားခ့ဲရတာလဲဆိုၿပီး လူေတြရဲ႕ ေဝဖန္ အျပစ္တင္တ့ဲ ပို႕စ္ေတြဟာ Twitter စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိေနပါတယ္။ Armand အေနနဲ႕လည္း အခုလိုမ်ိဳး ရူးေၾကာင္ေၾကာင္စတန္႕ျပကြက္မ်ိဳး ျပသခ့ဲတ့ဲအတြက္ ေနာင္တရေနမွာ က်ိန္းေသပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာနဲ႕ပဲ ေနာက္ပိုင္းရရွိတ့ဲသတင္းေတြအရ Armand တစ္ေယာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲျခင္းမ်ိဳးမရွိဘူးဆိုၿပီး သိရွိရပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႕လည္း ဒီလို ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ စတန္႕ျပကြက္မ်ိဳးကို ျပသဖို႕ မႀကိဳးစားၾကပါနဲ႕ေနာ္ . . .
Tags Lamborghini Social Media
Previous ရှားပါးမျိုးရိုးဗီဇကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာ မထိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး။
Next လူအများရဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခြင်းခံနေရတဲ့ Balenciaga ရဲ့ ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ကျော် ဖိနပ်ဒီဇိုင်းများ။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ အသစ်အသစ်တွေကို အမြဲတမ်းရှာဖွေလေ့လာနေကြပြီး ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း လူဦးခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ အင်္ဂါအသစ်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ ဦးခေါင်းထဲမှာ အမြဲတမ်းတည်ရှိနေခဲ့တဲ့ အင်္ဂါတစ်ခုကို အခုချိန်မှတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းက သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအင်္ဂါအသစ်ဟာ …